Akụkọ - workingkpụrụ ọrụ nke hama ọkụ na okwu ndị chọrọ nlebara anya na iji
Workingkpụrụ ọrụ nke igwe ọkụ na ihe ndị chọrọ nlebara anya na iji
Olee otu hama eletrik si arụ ọrụ
Electric hama bụ ụdị electric akuakuzinwo, tumadi eji egwu ala na ihe, n'ala, brik mgbidi na nkume, multi-ọtọ electric hama nwere ike dakọtara na kwesịrị ekwesị malite ịgba na-akuakuzinwo, hama, hama malite ịgba, shọvel na ndị ọzọ na multi-ọtọ nzube .
Igwe eletrik na-ebugharị site na nnyefe usoro pistin na cylinder na-emegharị ikuku jikọtara ya, mgbanwe ikuku nke ikuku na-eme ka cylinder dị na hama na-emegharị ka ọ daa n'elu brik ahụ, dị ka à ga-asị na anyị kụrụ brik ahụ na hama.
Na mgbakwunye na igwe ọkụ eletrik dị ka ntụgharị igwe eletriki na ọrụ nke ntụgharị ihu na azụ, na-abụkarị igwe ọkụ eletrik nwere ọrụ nke igwe eletriki eletrik, a na-akpọkwa ụfọdụ hama eletrik mmetụta igwe eletrik. Igwe ọkụ dị mma maka nnukwu dayameta dịka 30MM ma ọ bụ karịa.
Principlekpụrụ ọrụ: ụkpụrụ nke igwe ọkụ eletrik bụ na usoro nnyefe na-eme ka mkpọpu ahụ rụọ ọrụ na-agbagharị, ma enwere nduzi dị n'akụkụ isi nke rotary nke mmegharị hama na-agbanwe agbanwe. Igwe eletrik na-ebugharị site na nnyefe usoro pistin na ikuku na-emegharị ikuku, mgbagharị ikuku nke ikuku na-agbanwe ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka elu ahụ dị elu site na brik ahụ, dị ka à ga-asị na anyị kụrụ brik ahụ na hama, ya mere aha nke na Brushless electric hama!
Nchedo onwe onye mgbe ị na-eji hama
1. Ndị ọlụ kwesịrị iyi ugegbe nchedo anya ha. Mgbe ha na-arụ ọrụ ihu, ha kwesịrị ikpuchi mkpuchi.
2, ọrụ ogologo oge nke ebe e wusiri ike nke ọma nti ntị, iji belata mmetụta nke mkpọtụ.
3. Mgbe ọrụ ogologo oge gasịrị, igwe egwu ahụ nọ n'ọnọdụ na-acha ọkụ. Mgbe dochie ya, a ga-akwụ ụgwọ nlebara anya maka anụ ọkụ.
4, ọrụ ahụ kwesịrị iji akụkụ ahụ, aka aka abụọ, igbochi ikike dị iche na-agbaji ogwe aka.
5, na-eguzo n'elu ubube ma ọ bụ ọrụ dị elu kwesịrị ime akwa ọdịda, ubube kwesịrị ịdị na nkwado ndị ọrụ ala.
Nlekọta maka ọrụ hama
1. Kwenye ma ike ọkọnọ ejikọtara na saịtị ahụ dabara na mpempe aha nke hama eletriki. Ma enwere mkpuchi nchebe.
2. malite ịgba bit na gripper kwesịrị dakọtara na nke ọma arụnyere.
3. Mgbe anyị na-egwu mgbidi, uko ụlọ na ala, anyị kwesịrị ibu ụzọ gosi ma enwere eriri ma ọ bụ ọkpọkọ.
4, na elu nke ọrụ ahụ, ị ​​paya ntị nke ọma na ihe ndị na-esonụ na nchekwa ndị na-agafe agafe, mgbe ọ dị mkpa ịtọ ntọala ịdọ aka ná ntị.
5. Kwenye ma a na-ebipụ mgba ọkụ na hama. Ọ bụrụ na agbanyere ike ọkụ, akụrụngwa ike ga-agbanye na-atụghị anya ya ozugbo etinyere plọg n'ime oghere ike, nke nwere ike ibute ihe egwu nke mmerụ ahụ.
6. Ọ bụrụ na ebe ọrụ dị anya site na ntinye ike na eriri dị mkpa iji gbasaa, a ga-eji eriri ndọtị nwere ikike zuru ezu na nrụnye ruru eru. Ọ bụrụ na eriri agbatị agbatị na-agafe n'okporo ụzọ na-agafe agafe, ọ ga-ebuli elu ma ọ bụ mee ihe iji gbochie eriri igwe anaghị akụda ma mebie.
Usoro ọrụ ziri ezi nke igwe ọkụ
1, “mkpọpu ala nwere mmetụta” ime ihe
(1) ịdọrọ na-arụ ọrụ mode isi na ọnọdụ nke mmetụta rotary oghere.
(2) tinye mkpọpu ala ahụ n'ọnọdụ a ga-egwupu, wee dọpụta ihe ntụgharị mgbapụta ọwụwa anyanwụ. Nkupu mmiri na-etinyere ntakịrị, nke mere na a ga-ewepụsị mgbawa ahụ kpamkpam, na-enweghị nrụgide nrụgide siri ike.
2, “chizul, ndinuak” ọrụ
(1) Denye uzo ọrụ na ọnọdụ nke "otu hammering".
(2) n'iji ihe nwuru anwu nke igwe egwu maka oru, adighi mkpa ikwali nsogbu.
3. Ọrụ "Drgba ala"
(1) Kwụpụ akara ọrụ na-arụ ọrụ gaa "mkpọpu ala" (enweghị hammering) ọnọdụ.
(2) Etinye malite ịgba bit na ọnọdụ na-gbapuru, na mgbe ahụ sere sere mgba ọkụ akpalite. Naanị nye ya nudge.
Ojiji nke ihe dull ma obu nke gbagọrọ agbagọ ga-eme ka onodu ojoo di elu ma belata arụmọrụ arụmọrụ, yabụ ọ bụrụ na achọta ọnọdụ ndị ahụ, a ga-edochi ya ozugbo.
Fastening ịghasa nnyocha hama ozu
N'ihi mmetụta nke ọrụ nke hama eletrik kpatara, nkedo nkedo nke fuselage eletrik dị mfe ịmalite. Ekwesịrị ịlele ọnọdụ mkpuchi ahụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na ịghasa adịgboroja, ekwesiri ikwusi ya ike ozigbo, ma ọ bụghị ya, ọ ga - eduga na ọdịda nke igwe eletriki.
Lelee ahịhịa carbon
Ahịhịa carbon dị na moto ahụ na-eripịa ihe, ozugbo ogo ya gafere oke, moto ahụ ga-ada, yabụ, a ga-edochi ahịhịa carbon a na-eyi ozugbo, na mgbakwunye na ahịhịa carbon ga-adị ọcha mgbe niile.
Lelee eriri mkpuchi na-echebe
Nchedo nke ịgbanye waya bụ ihe dị mkpa iji chebe nchekwa onwe gị, yabụ app ngwa (metal shell) kwesịrị ka a na-enyocha ha mgbe niile na shea ha kwesịrị ịgba nke ọma.
Hama electric hama